लाईसेन्सको कुपन लिन झडप गर्नु पर्ने ? – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
लाईसेन्सको कुपन लिन झडप गर्नु पर्ने ? – NEWS24 TV
तपाईलाई लाग्न सक्छ यहाँ कुनै सुरक्षा निकायले नयां भर्नाका लागि तालीम दिइरहेको छ । यि व्यतmीहरु कुप्री परेर भागभाग गर्दैै छन् । नेपाल प्रहरीले टाउको लाठी हान्दै छ हेर्दा अनौठो दृश्य भाइरल भैरहेको छ र यसको वास्तविकता भने भिन्न छ । यो भिड कुनै सुरक्षा निकायको तालीमको हैन । यो त यातायात व्यास्था कार्यालय कोशीमा मोटरसाइकल चालकको अनुमती पत्रको फारम भर्ने कुपन पाउनका लागि गरिएको संघर्षश हो । करीब ९ महिना पछी खुलेको सवारीचालक अनुमती पत्रको आवदेन भर्नका लागि राति २ बजेदेखी नै हजारौँको भिड लागेपछी कुपन सिस्टम लागु गरीयो । कुपन सिस्टाम समेत प्रभावकारी नभएपछी सेवाग्राहीलाई यसरी लाइनबाट भित्र छिराउन लागियो तर प्रहरीले सबैको टाउको लाठी हान्न लागेपछी सबै यसरी निउरेर भित्र छिर । टाउको बचाउन केहीले हेलमेट पनि लगाएका छन्् ।